Ukubaleka okuNcunci okuSwiti kwi-AZ- Ngaphandle kweGridi & nezinto eziluncedo - I-Airbnb
Ibhokisi yomthwalo enkulu yentsimbi sinombuki zindwendwe onguTroy And Tina
UTroy And Tina yi-Superhost
Indawo yethu encinci ekuthiwa yiSweet Escape imalunga nokuphinda uqalele ekukhanyeni kwakho! Sekunjalo, le nto inokonwatyelwa engaqhelekanga ikuvumela ukuba uphumle kwitekhnoloji ukuze ungangeni kwi-intanethi. Ifowuni ayifumaneki kangangemayile eyi-1. Siphinde senza into yokuthumela esetyenzisiweyo saza senza indlu encinci entle ekuzikhupheni kuyo yonke imihla. Le ndlu incinci ibonakala incinci kodwa inezinto ezinokusetyenziswa ekhitshini ezipheleleyo, isofa enkulu, igumbi lokulala elahlukileyo elinebhedi enkulu neefestile ezinkulu kuyo yonke le ndawo.
Ukongezelela, uza kukwazi ukusebenzisa igesi nezitulo eziyi-2 zengca ezisongwayo.
4.80 · Izimvo eziyi-65
Umbuki zindwendwe ngu- Troy And Tina